Manchester United oo bisha Janaayo doonaysa inay la soo wareegto Declan Rice iyo Kalidou Koulibaly - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
October 9, 2019 at 07:55 Manchester United oo bisha Janaayo doonaysa inay la soo wareegto Declan Rice iyo Kalidou Koulibaly2019-10-09T07:55:44+01:00 CAYAARAHA
(Manchester) 09 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay raacdo ugu jirto saxiixyada Declan Rice iyo Kalidou Koulibaly.
Laacibkan khadka dhexe iyo midkan daafaca dhexe ayaa loo maleynayaa inay ka mid yihiin magacyada liiska xiddigaha kooxda ay suuqa ka doonayaan bisha Janaayo, iyadoo madaxda Man United ay isha ku hayaan inay lacag badan ku qarash-gareeyaan oo ay ku horumariyaan kooxda.
Macallinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa mustaqbalkiisa naadiga uu shaki ku jiraa, laakiin taasi kama horjoogsanayso sii qorshaynta bartilmaameedyada suuqa kala iibsiga xiddigaha, sida laga soo xigtay shabakadda Goal.com.
Ciyaartoyda kale ee loo maleynayo inay xiiseynayaan Red Devils waa xiddiga Juventus ee Mario Mandzukic iyo kan kooxda Tottenham Hotspur ee Christian Eriksen, iyadoo Man United ay qorsheyneyso inay ku dhammaysato afarta sare oo ay ku soo laabato Champions League qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka.
Si kastaba ha ahaatee, Rice ayaa loo maleynayaa inuu yahay mudnaanta kooxda, iyadoo ay jireen bixitaanno uu doonayey xilli ciyaareedyadii u dambeeyay, taasoo u sahleysa United inay ka helaan laacibkan khadka dhexe.
« Kooxda Barcelona oo hoggaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Erling Haaland
Soomaaliya Oo Ka Qeybgashay Shir Ku Saabsan Macdanta Oo Ka Dhacay Geneva »